मन्त्री बन्न हानथाप, आवश्यकता २०, दौड १ सय ५६ को : RajdhaniDaily.com
Homeप्रदेशप्रदेश ३मन्त्री बन्न हानथाप, आवश्यकता २०, दौड १ सय ५६ को
काठमाडाैं । आफ्नै दल कांग्रेस तथा गठबन्धन दलमा मन्त्री बन्नेहरूको हानाथाप हुने क्रम बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि उनी गत २९ असारमा पाँचौंपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएकै दिन देउवाले आफ्नै दलका दुई जना र गठबन्धनमध्येको एक माओवादी केन्द्रका दुई गरी चार जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
देउवाले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्द्वारा मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हाल्दै आएको १३ दिन बितिसकेको छ । तर, पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा समग्र सरकारको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन । हाल देउवासहित पाँच जना मन्त्रिपरिषद् रहेकाले उनले अब जम्मा २० जना मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउँछन् । त्यसमा पनि मन्त्रालयको संख्या २१ मात्रै रहेकाले फुल मन्त्री १७ जना मात्रै नियुक्त हुन सक्छन् भने बाँकी चार जना राज्यमन्त्री बनाउनुपर्छ । नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा आफंै १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन विवश छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय लिन निकै कठिन भइरहेको छ भने प्रशासनिक कामकाजमा समेत उल्झन आइपरिरहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रीको अभावमा मन्त्रालयको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा छलफल गर्नुपरेमा सचिव फाइल लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ धाउनुपर्ने वाध्यतामा छन् ।
गठबन्धन दलमा मन्त्री बन्न अत्यधिक हानथाप भइरहेको र त्यसले नेतृत्वमा रहनेलाई निकै सकस परिरहेको तथ्य माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैंले खोलेका छन् । राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र मन्त्री बन्नेको लर्को लागेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिले आफूलाई आतंकित पारेको बताए । ‘कसलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे मेरो दिमागमा आतंक छाएको छ, हाम्रा ४९ जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ,’ दाहालले भने । गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले बढीमा सातवटासम्म मन्त्रालय पाउने प्रारम्भिक सहमति छ । दुई जना भने सुरुकै दिनमा मन्त्री भइसकेका छन् । दाहालले आफ्नो निवासमा चार÷पाँच दिनदेखि मन्त्री बन्ने चाहना गर्नेहरूको लर्को लागेकाले आफू मानसिक तनावमा भएको समेत बताए । सबै जनालाई मन्त्री नै चाहिने संस्कार र प्रवृत्ति गलत भएको स्पष्ट पार्दै दाहालले आदर्शको कुरा गरेर नथाक्नेहरूले समेत जसरी पनि मन्त्री बनाउनैपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको बताए । उनले मन्त्री नभए पार्टीभित्र नेतृत्वलाई सराप्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त रहेको जनाए ।
देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा गठबन्धनसहित महन्थ ठाकुर समूहको राजपाको सहित १ सय ६५ मत पाएका थिए । उनलाई गठबन्धन सरकारमा गठबन्धन दलका रूपमा रहेका माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । यसमध्ये एमाले नेता नेपाल समूह मन्त्रीमा जाने नजाने बारेमा अनिर्णीत छ । हाल सरकारमा जानका लागि देउवालाई मतदान गर्ने सांसदहरूमध्ये नेपाल, महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई यस मन्त्रीको दौडमा छैनन् । राजमोकी दुर्गा पौडेल पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छैनन् । चार जना यसअघि नै मन्त्री बनिसकेका छन् । यसरी विश्लेषण गर्दा गठबन्धनका प्रतिनिधि सभाका १५६ सांसदहरू मन्त्री बन्ने दौडमा हानाथाप गरिहेका छन् ।
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस शनिबारसम्म वर्षा हुने, चार प्रदेशमा चट्याङसहित पानी पर्ने
माओवादीमा मात्रै नभएर जसपाका यादव र ठाकुर समूहमा पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा निकै सकस छ । यसो त प्रधानमन्त्रीकै पार्टी कांग्रेसमा पनि मन्त्री बन्न दौडधुप गर्नेको लामै लर्को रहेको बताइन्छ । सत्ता गठबन्धन दलले १५ देखि १८ वटा मन्त्रालय मागेकाले देउवालाई कांग्रेसभित्रै चित्त बुझाउनसमेत निकै कठिन भइरहेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई १७ मन्त्रालयको भारी
१. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
२. कृषि तथा पशुपक्षी विकास
५.भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण
६. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
७.महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
८.युवा तथा खेलकुद
१०.वन तथा वातावरण
११.शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि
१२. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
१३.संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१४.संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
१५.सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
१६. सहरी विकास
१७.स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
मन्त्री माग्न आउने हुलका कारण मेरो दिमागमा आतंक छाएको छ : पुष्पकमल दाहाल
अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र
कसलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे मेरो दिमागमा आतंक छाएको छ । हाम्रा ४९ जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । मन्त्री माग्न आउने हुलका कारण म चार÷पाँच दिनदेखि मानसिक तनावमा छु । यहाँ मन्त्री नपाए नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ, त्यसैले पाएसम्म त ४९ जनालाई नै मन्त्री बनाइदिन हुन्थ्यो ।
महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति किन बेवास्ता ?
कोभिड महामारीको अवस्था उस्तै भइरहँदा समेत सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । कोभिड व्यवस्थापन तथा भ्याक्सिन आपूर्तिको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा २४सै घण्टा छलफल र तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ तर मन्त्री नहँुदा सो कार्यले गति लिन सकेको छैन जसका कारण कोभिड व्यवस्थापन कार्य नै कमजोर हुन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छिटोभन्दा छिटो योग्य र कुशल मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
काठमाडौं । अबको तीन सातापछि दसैं सुरु हुन्छ । दसैं अर्थात् अधिकांश नेपाली जनताको प्रमुख चाड । दसैंपछि लगत्तै सुरु हुन्छ तिहार, त्यसपछि छठ...
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनतालाई उत्तेजित बनाउन कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौं जिल्लास्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले...
फर्नान्डेज युएस ओपनको फाइनलमा
न्यूयोर्क । क्यानडाकी टिनएजर लेला फर्नान्डेज युएस ओपन टेनिसको फाइनलमा पुगेकी छिन् । अमेरिकाको न्युयोर्कमा शुक्रबार बिहान सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा दोस्रो वरियताकी एरिना साबालेन्कालाई...
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरू नै अनिर्णीत बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमै एमसीसी...
काठमाडौं । दुई महिनाअघि अदालतबाट अन्तरजातीय विवाह गरेकी सीता पटेल दाइजो नल्याएको निहुँमा श्रीमान् र ससुराबाट कुटिएको भन्दै न्याय खोज्न काठमाडौं आएकी छन् । प्रहरीबाट...
टिकटक बनाउँदा सेती नदीमा खसेकी युवती बेपत्ता
तनहुँ । तनहुँमा टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा खसेर एक युवती बेपत्ता भएकी छन् । मंगलबार दिउँसो शुक्लागण्डकी नगरपालिका- ८ लालिमकी पवित्रा लम्साल बेपत्ता भएकी...
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु
सर्लाही । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बागमती नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने ३८ वर्षिय...
सेयर बजारमा हरियाली, ४१.३६ अंकले बढ्याे
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – ३ फागुन
कांग्रेस बैठक सर्‍यो
देशभर वर्षा कायमै, तीन दिनको मौसम यस्ताे छ
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अन्तरसंघर्ष र पुनर्गठन
नेपालका पश्चिम क्षेत्रमा बढी वर्षा, २४ घण्टामा ११ जनाको मृत्यु
यादवको भण्डाफोर गर्न ठाकुर–महतो मधेस दौडमा
निराजन पौडेल - September 11, 2021
किन हुन्छन् आफन्तबाटै हत्या ?
एमसीसीका विषयमा सरकार अनिर्णीत
महेश्वर गौतम - September 10, 2021
पताया र फुकेटकाे याैनबजार सुनसान, १ लाख याैनकर्मी प्रभावित
१६ जना सीडीओकाे सरुवा (को कहाँ ?)